Umhlahlandlela We Poker Wabaqalayo | eNingizimu Afrika
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela we-poker wabasaqalayo
Umhlahlandlela we-Poker Wabasaqalayo
Ngabe unesifiso sokuqala ukudlala i-poker eku-inthanethi kepha awazi ukuthi ungaqala kuphi? Ngakho ke ufike endaweni efanele. Kulula futhi kumnandi ukufunda i-poker eku-inthanethi futhi inzuzo eyengeziwe ukuthi ngeke ube novalo njengalapho uzama ukufunda imidlalo endlini ejwayelekile ye-poker. Ngale ndlela ungakhuphula ukuzethemba kwakho ngaphambi kokuba uthathe izinzuzo!
Abaqalayo be-poker eku-inthanethi kufanele bafunde kakhulu ku-poker ngaphambi kokuthi bazame umdlalo. Sibhale amanye amathiphu ayisisekelo ongawalandela ukuze uqalise:
Okokuqala, funda imithetho ye-poker.
Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi ukhetha igumbi elihle le-poker eku-inthanethi ozodlala kulo – Bheka ikhasi lethu lesiqondisi le-poker eku-inthanethi.
Ungadlali ngemali yakho, qala ngokuzilolonga ematafuleni emali amahhala. Futhi musa ukuchitha isikhathi sakho esiningi kumatafula wamahhala njengoba uzobona ukuthi abantu babheja ngokwehlukile lapho bengenayo imali engcupheni.
Lapho usuthathe isinqumo ngegumbi le-poker eku-inthanethi, faka imali.
Abaqalayo be-poker eku-inthanethi kufanele baqale ngokudlala kumatafula we-poker aphansi.
Uma uzimisele ngomdlalo, funda incwadi enhle yabaqalayo be-poker eku-inthanethi.
Dlala eminye imidlalo ye-PL / NL / Limit ematafuleni asezingeni eliphansi.
Uma uhlela ukuhlala egumbini le-poker eku-inthanethi, yenza amanothi kubadlali abajwayelekile ohlangana nabo.
Funda ezinye izihloko zabaqalayo be-poker eku-inthanethi.
Qhubeka udlale ematafuleni asezingeni eliphansi uze uqale ukuwina njalo.
Bese ukhuphukela ezingeni kusethi elandelayo yamatafula ezigxobo ze-poker kodwa ungabheja phezulu kakhulu ekuqaleni, kunokuba uthathe kancane.
Khumbula, i-poker ngumdlalo wekhono, uma ufuna ukudlala into elula nejabulisayo, kunokuba uye ematafuleni we-slots. Kungakho kubalulekile ukuthi ufunde okuningi ku-poker naku-poker eku-inthanethi nokuthi kungani kufanele ufunde futhi ufunde kulabo oqhudelana nabo.
Ukuzijwayeza kwenza uphemelele. Qhubeka udlale, noma ngabe yi-poker yamahhala noma i-poker ephansi, futhi nyukela kuphela kumatafula aphakathi nendawo lapho usuzethembile.